Fikarakarana ny fahasalaman'ny biby fiompy - BALLYA
Amin'ny maha-biby mpiara-dia amin'ny ain'ny olombelona azy, ny biby fiompy dia loharanon'ny fahasambarana sy fiainana sambatra. Amin'ny tranga maro, ny biby fiompy dia mety hahatonga ny fiainan'ny olona ho salama kokoa sy tsara kokoa. Ny fifandraisana amin'ny biby fiompy dia tena mahasoa ny fon'ny olombelona ary afaka manalefaka ny fihenjanana ara-tsaina ataon'ny olona koa izany. Ho an'ny olona antitra manirery, ny fiandrasana biby fiompy dia manampy loko kely amin'ny fiainany ary mpiara-miasa tsara amin'ny fiainany. Ho an'ny ankizy, ny fitandremana biby fiompy dia afaka miteraka fahatsapana andraikitra sy fitiavana ary manatsara ny fahaiza-manao ara-tsosialy. Ho an'ny fianakaviana Ny biby dia tsy vitan'ny hoe miaro ny ankohonana amin'ny maha mpiambina azy fotsiny fa koa mampiroborobo ny firindran'ny fianakaviana.
Ny biby fiompy mahazatra indrindra dia ny saka sy alika. Fanadihadiana momba ny olona izay mitazona alika sy saka eo amin'ny fiainana, izy ireo koa dia manana fahasalamana somary salama, nahena tsikelikely mba hahita dokotera. Hita izany fa manampy amin'ny fahasalaman'ny olombelona ny fitazonana biby fiompy. Na dia eo am-piheverana ny fahasalamana sy ny fiadanam-piainan'ny zanak'olombelona aza dia zava-dehibe ihany koa ny fahasalaman'ny biby fiompy. Ny fisian'ny biby fiompy ankehitriny dia mahazatra loatra, ary ny fahasalaman'ny biby fiompy dia mifandray akaiky amin'ny ain'ny olona sy ny fahasalaman'izy ireo.
BALLYA - Omeo kitapo fikarohana aretina momba ny biby fiompy
Ho an'ny kitapom-pahaizana fitsapana isa
Kitapo fitsapana Quantitative CRP
Kitapo fitsapana Quantitative CDV Ab
Ho an'ny kitapom-pahaizana fitsapana isa aretina
Kitapo fitsapana fSAA
Kitapo fanandramana FPV Ag Quantitative
Kitapo fitsapana an-kibo
Momba ny fahasalaman'ny biby
Fahasalamana momba ny biby
Ny tontolo iainana maloto koa no mahatonga ny aretin'ilay biby. Misy bakteria isan-karazany eo amin'ny tontolon'ny fiainana ny olona sy ny biby fiompy. Ny bakteria dia hisy amin'ny toerana iainana sy sakafo. Raha vao mitombo be ny bakteria manimba amin'ny tontolo iainana dia hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny biby izany. Tokony hodiovina isan'andro ny vilia fiandrasana biby, ny rano fisotro dia tokony ovaina matetika, ary ny toerana ipetrahana ny biby dia tokony diovina matetika mba hisorohana ny fitomboan'ny bakteria.
Alika voan'ny aretin'ny lyme
Lyme aretina amin'ny alika dia aretina mikraoba izay mifindra sy mifindra amin'ny tsipika, ka miteraka soritr'aretina toy ny tazo mahery, tongotra malemy ary fivontosan'ny tonon-taolana. Indraindray mety ho matotra kokoa izy io ary miteraka fahasimban'ny voa, aretim-po na olana amin'ny rafi-pitatitra foibe. Na dia aretina Lyme aza dia iray amin'ireo aretina mahazatra indrindra eto amin'izao tontolo izao, dia 5% ka hatramin'ny 10% amin'ireo alika voan'ny aretina ihany no mahatsapa soritr'aretina. Rehefa miseho ny soritr'aretina dia afaka maharitra andro maromaro izy ireo, avy eo manohy miseho sy manjavona mandritra ny herinandro maro.
Alika voan'ny aretina addison
Ny aretin'i Addison (hormonina ambany adrenocortical) dia aretin-tsaina vokatry ny famokarana hormonina adrenalina, kortisol ary aldosteron.
Ny fihary adrenal dia fihary kely roa eo akaikin'ny voan'ny alika. Ny fihary ao dia manampy amin'ny fandrindrana asa isan-karazany amin'ny vatana ary tompon'andraikitra amin'ny famokarana kortisol sy aldosteron. Cortisol dia steroid manampy ny alikao hiady amin'ny adin-tsaina, raha aldosteron dia manampy amin'ny fifehezana ny rano sy ny electrolytes ao amin'ny vatana. Ny tsy fahampian'ireto hormonina roa ireto dia antsoina hoe tsy fahampiana adrenal na aretina Addison.
Misy karazany roa ny aretin'i Addison, antsoina hoe aretina Addison voalohany sy faharoa. Ny aretina Addison voalohany dia ny endrika mahazatra indrindra. Mety hozaraina bebe kokoa amin'ny aretina mahazatra sy atypical. Ny karazana lehibe an'i Addison dia ny vokatry ny hery fiarovan'ny alika manokana manimba ny fihary adrenal.
Alika voan'ny aretin'ny voa
Ny soritr'aretin'ny aretina voa isan-karazany dia ho hafa kely, toy ny glomeruli sy ny nephritis: mety hitranga ny edema subcutaneaux sy ny ascites, ary salama matetika izy ireo, saingy somary very lanja sy very fahazotoan-komana. Amin'ny tranga goavambe, fihenan-danja be sy tsy fahampian-tsakafo, Polyuria, misotro bebe kokoa, maloiloy, mandoa ary soritr'aretina hafa. Tsy fahombiazan'ny voina: ny soritr'aretina ara-pahasalamana dia maranitra koa ary mitohy, ary tsy voafaritra manokana. Amin'ny tranga maranitra, ny tsy fahampian-tsakafo, ny fandoavana, ny fahaketrahana ary ny palpation dia mety hiseho mihalehibe sy maharary. Ny tsy fahombiazan'ny renal maharitra dia tsy misy soritr'aretina klinika miharihary, na soritr'aretina malefaka ihany, toy ny fisehoan'ny fofona misy tsiranoka amoniaka, fihenam-bidy kely, polydipsia kely sy polyuria, tsy fahampian-drano, tsy fanarahan-dalàna ary fandoavana.
Alika voan'ny aretim-po
Ny amboa voan'ny aretim-po dia mizara roa amin'ny ankapobeny. Ny voalohany dia maranitra. Ny fambara dia sarotra ny miaina, ny pulso dia matetika, ary tsy te hivoaka izy ireo. Ny molotra sy ny maso dia mety ho lasa volomparasy, ary matetika dia mianjera tampoka izy ireo. Eo amin'ny tany dia misy koa edema pulmonary. Raha maharitra izy io ary mivoatra miadana ny aretina dia mety ho volana na taona maro izany. Tsy dia tsara ny fanahy. Tsy tiako ny manao fanatanjahan-tena. Ho reraka be rehefa avy manao fanazaran-tena kely, ary tena sarotra ny miaina. Ho fanampin'izay, ny feon'ny fo dia tsy dia matanjaka, ary matetika ny fo mimenomenona no heno.
Aretina hoditra alika
Aretin-koditra: aretina aretin'alika alika mahazatra kokoa, izay matetika mitarika amin'ny fanesorana volo eo an-toerana amin'ny endrika boribory. Aretin-koditry ny bakteria: aretin-koditra ateraky ny aretina mikraoba, matetika amin'ny hoditra matevina, mivoaka purulent ary mivalan-dra.
Aretin-koditry ny parasitika: noho ny katsentsitra toy ny mites izay miteraka fivontosan'ny hoditra, mangidihidy, eritema, aretin-koditra misy mizana sy mizana maro.
Aretin-koditry ny alergika: Noho ny fihinan'ny alikaola sasany amin'ny tontolo iainana, dia misy soritr'aretin'ny mangidihidy mafy ny hoditry ny alika. Ny aretin-koditry ny alika dia matetika mandavantaona, ary aretin-koditra mitaiza ary lava ny fitsaboana.
Aretina alika parvo
Parvovirus amin'ny canine dia areti-mifindra mafy miaraka amin'ny fifindran'ny firaisana ara-nofo amin'ny alika. Izy io dia miavaka amin'ny enteritis hemorrhagic sy myocarditis.
Ny parvovirus an'ny kanine dia mifindra be amin'ny alika ary azon'ny alika amin'ny taona rehetra. Na izany aza, ny alika manomboka amin'ny nisara-nono ka hatramin'ny 90 andro dia marary mafy kokoa ary mafy kokoa. Ny alika kely sasany dia misy tampoka tampoka, tsy fahombiazan'ny fo ary mety hipoitra ao anatin'ny fotoana fohy ny myocarditis ary ho faty tampoka. Araka ny karazana alika voakasik'izany, ny alika madio sy alika hafahafa dia manana tranga ambony kokoa noho ny alika tompon-tany. Ny aretina dia mety hitranga mandritra ny taona, fa matetika rehefa ririnina sy lohataona mangatsiaka. Ny alika marary no manana atiny misy poizina avo indrindra ao amin'ny taimbolo.
Inona no aretina mampitsahatra alika
Ny aretin'i Cushing, fantatra amin'ny anarana hoe Cushing's syndrome, dia milaza alika izay manafina hormonina be loatra ao amin'ny fihary adrenal. Ny fe-potoana ara-pitsaboana an'io aretina io dia ny korteksan'ny hyperadrenal. Raha tsorina, aorian'ny fijaliana amin'ity aretina ity, ny sosona ivelany amin'ny fihary adrenal dia handinika ny asany.
Fambara an'ny aretin'i Cushing: fisotroana be loatra sy fisotroan-dronono, fihinanana tafahoatra, fivalanana matetika amin'ny alina, asma matetika, kibony mihalehibe, tavy matavy eo amin'ny hatoka sy soroka, fihenan'ny volo, fahalainana ary kirany fotsy mafy amin'ny hoditra.
Saka lanja mahasalama
Ny lanjan'ny saka dia faritana amin'ny haben'ny karazany sy ny haben'ny vatany. Ohatra, ny saka Maine dia lehibe kokoa ary milanja mihoatra ny 10 kilao, fa ny saka tanora amin'ny ankapobeny dia mahatratra 3 kg ao anatin'ny efatra na dimy volana, ary ny saka olon-dehibe dia manana haben'ny vatana 3-6 kg. Ny saka lahy dia mavesatra noho ny saka vavy. Ny saka kely dia mazàna eo amin'ny 3 kg, fa ny saka lehibe kosa mety ho 6 kg.
Ny soritr'aretina klinika voalohany dia matetika tsy voafaritra manokana, toy ny anorexia miverimberina, ny fihenan-danja, ny polydipsia sy ny fisotrony, ny fandoavana indraindray na ny fivalanana ary ny tsy fahamaizana. Noho ny fahaizan'ny fitehirizana mafy atin'ny aty, dia hita soritr'aretina manokana kokoa toy ny jaundice, encephalopathy hepatic, fironana mandeha ra, na ascites amin'ny dingana manaraka amin'ny aretina. Ireo fambara ireo dia miseho miaraka amin'ny fihenan'ny fiasan'ny aty.
Ny fitsaboana aretin'aty saka dia miankina betsaka amin'ny anton'izany, ary izany no mahatonga ny biopsy aty manan-danja. Ankoatry ny fanamaivanana ny soritr'aretina, ny fanampiana ara-tsakafo no mahomby indrindra. Ny fampidirana intravenous dia tanterahina amin'ny saka tsy ampy rano, ary ny fanafody fiarovana ny atiny sy ny fanafody procoagulant dia ampiasaina amin'ny fitsaboana simika araka ny fepetra.
Saka voan'ny aretin'ny voa
Ny soritr'aretina fototry ny nephropathy dia misy fahatsapana ao amin'ny faritra voa. Matetika ny saka dia mipoitra eo an-damosiny sy amin'ny tongony aoriana, ary tsy sahy mihetsika. Ny saka ao amin'ny faritra voa dia tena mahatohitra. Manana soritr'aretina mikorontana toy ny fihazonana ny urin sy fanaintainana izy ireo. Tamin'ny voalohany dia miseho ho oliguria izy io, ary avy eo miova ho polyuria; ny edema voa amin'ny ambaratonga samihafa dia misy, ary ny edema amin'ny rantsam-batana sy hodi-maso dia miharihary.
Fitsaboana aretin'ny voa: ny nephropathy dia azo zaraina ho prerenal, renal ary postrenal. Ny zava-dehibe indrindra dia ny mahita ny antony voalohany ary manala ny antony voalohany amin'ny fitsaboana marina sy mahomby. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny fampidirana dia ampiasaina hampitomboana ny fanosotra voa, hampiroborobo ny fiasan'ny voa, ny fifehezana ny fivontosana sy ny aretina ary koa azo tsaboina amin'ny fanafody hormonina.
Aretina vestibular saka
Ny Vestibular Syndrome dia karazana Syndrome neurolojika mahazatra amin'ny biby kely, misy antony maro samihafa. Avy amin'ny loharanon'ny aretina dia azo zaraina ho afovoany sy peripheral izy io. Mandritra izany fotoana izany dia misy koa ny natiora teraka sy azo. Izy io dia aretina iray amin'ny tsy fandanjalanjan'ny vatana saka ateraky ny fahasimbana afovoany amin'ny vatan'ny vestibular miorina ao amin'ny medulla oblongata ary ny fahasimban'ny ampahany amin'ny hozatra vestibular an'ny nerve cerebral faha-8.
Aretina nify saka
Rehefa misy ny calcul sy gingivite dia ny rora no voalohany be indrindra. Mihena tsikelikely ny fihinanana sakafo. Te hihinana aho nefa tsy manokatra vava, mihena tsikelikely ary mifoka fofona. Ity aretina ity dia tsy eo amin'ny vatan'ny saka antitra ihany, fa koa ho an'ireo saka biby fiompy izay mitsabo nify sy manadio ny nifiny indraindray, dia mora voan'ny areti-nify toy ny aretin-tratra izy ireo.
Ny vavany dia manana vazana tsara amin'ny nify mahasalama. Mazava ho azy fa ho tsara kokoa izy ireo. Hanangana fototra iorenan'ny fahasalaman'ny saka sy saka izy ireo, koa tsy tokony hataon'ny ray aman-dreny tsirambina ny nifiny. Ny saka antitra dia manana calcul de nify sy gingivite. Ny tena antony dia mihinana sakafo malefaka mandritra ny fotoana maharitra izy ireo na tsy miraharaha ny fahadiovana am-bava. Ny famantarana lehibe dia ny fidorohana rano, ary mihena tsikelikely ny fihinanana sakafo. Indraindray izy ireo te-hihinana nefa tsy manokatra vava, mihena tsikelikely ny vatany, ary ratsy ny fofon'izy ireo ratsy.
Maso aretina saka
Aretina mety hiseho amin'ny mason'ny saka
1. Fotsy na mena manodidina ny maso ny maso: mety ho conjunctivitis sy keratitis izany.
2. Rehefa mamely ny maso ny hazavana dia hatahotra hazavana izy: mety ho keratitis, conjunctivitis na glaucoma.
3. Fivoahana mavo-maitso marobe no miseho manodidina ny maso: mety ho maso maina, conjunctivitis na keratitis ateraky ny aretin'ny taovam-pisefoana ambony.
4. Rehefa mamirapiratra ny maso dia miseho mihalehibe ihany koa ireo mpianatra: mety hyperthyroidism na fahasimban'ny fahitana avo ateraky ny tosidra ambony izany.
Amyloid serum A (SAA) no proteinina lehibe indrindra amin'ny saka ary mamatotra ny lipoprotein avo lenta ao anaty (HDL). Ny fandalinana klinika ankehitriny dia mifantoka amin'ny karazana SAA mandritra ny valiny mahery vaika amin'ny aretina mamaivay.